My freedom: The First Salary + Modeling (again)
စာမရေးတာကြာတော့ ဘယ်နားကစရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ အားလုံးသိပြီးသားမို့ Excuse ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးနော့... မနေ့ကပဲ Assignment တစ်ပိုင်းတင်ပြီးသွားတယ်။ နေ့တိုင်းလိုလို အိမ်ပြန်ရောက် ဘုရားရှိခိုးပြီးတာနဲ့ စာအုပ်တွေကြားထဲ စာဖတ်၊ Assignment ရေးနေရတာပဲ။ စာအုပ်တွေက သူများဆီက ငှားထားတာတွေ။ တချို့စာအုပ်တွေဆို ၀ယ်ထားချင်တယ်။ Drug Information Handbook ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အထူကြီးဆိုတော့ ၀ယ်ရင်ဈေးအရမ်းကြီးမယ် ထင်တယ်။ နောက်ကြုံမှ ဈေးစုံစမ်းပြီး ရှာဝယ်ကြည့်ရမယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့(၂၅)ရက်နေ့က ပထမဆုံးလစာရတယ်(^_^)။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ သီတင်းကျွတ်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေတာနဲ့ အရမ်းခင်တဲ့အစ်မဆီသွားပြီး သီတင်းကျွတ်ကန်တော့လိုက်တယ်။ သူက ကန်ဒီနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ အိမ်ထိရောက်လာပြီး ဆေးခန်းလိုက်ပို့ပေးတတ်တဲ့သူလေ။ ဒီစင်္ကာပူမှာတော့ မိသားစုလိုပါပဲ။ မနေ့က အလုပ်ကအပြန် အစ်မအိမ်သွားပြီး ကန်တော့တော့ အစ်မက ကန်ဒီ့မျက်နှာပြည့်ပြီး ကြည်လာတယ်တဲ့ ဟီးး... ဒါ ၀,ဖို့လမ်းစလား?! (>.<)။ အစ်မကသာ အဲ့လိုပြောတာ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ မျက်တွင်းတွေတောင် ကျနေတယ်လို့ ထင်တာပဲ။
ဒီလ(၃)ရက်နေ့မှအလုပ်စလုပ်ပြီး (၂၅)ရက်နေ့လစာရတာဆိုတော့ ဒီလအတွက် တော်တော်လျော့ပြီးရမယ်ပဲ ထင်ထားတာ။ ဘဏ်ထဲစစ်လိုက်တော့ အပြည့်နီးပါးရတယ်။ ၂၀၀လောက်ပဲ လျော့တယ်။ ပထမဆုံးလစာဆိုတော့ ကန်ဒီ့နေစရိတ်၊သုံးစရိတ်ပဲချန်ထားပြီး ကျန်တာအကုန် အမေတို့ဆီ လွှဲလိုက်တယ်။ လိုအပ်တာတွေတောင် နောက်လမှပဲဝယ်တော့မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ ဦးလေးတွေ၊ အဒေါ်တွေအားလုံးကို တစ်ယောက်ကိုဘယ်လောက် စာအိတ်လေးနဲ့ ကန်တော့ပေးပါလို့ အမေ့ကိုပြောထားတယ်။
ကန်ဒီ့မှာဦးလေးတွေ၊အဒေါ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဖေနဲ့အမေတို့နှစ်ယောက်လုံးမှာ မောင်နှမတွေများတာကိုး။ ပြည့်စုံတဲ့လူတွေရှိသလို မပြည့်စုံတဲ့လူတွေလည်း ရှိတာပေါ့။ အမေ့ဘက်ကအဒေါ်တွေဆို ကန်ဒီငယ်ငယ်လေးထဲက အပေါ့၊အလေး(ကန်တော့:P)သွားတာကအစ လိုက်လုပ်ပေးပြီး ထိန်းလာတဲ့သူတွေ။ ကန်ဒီဘာကြိုက်တတ်လဲ... မနက်ဆို ကော်ဖီနဲ့ အီကြာကွေး(သို့)စမူဆာ စားတတ်တာ... ကန်ဒီအာလူးကတ်တလိတ်ကြိုက်တာ... ကြက်ဥဆူးပုတ်ရွက်ကြော် ကြိုက်တာ... ကြာဇံချက်စားရင် ကြွက်နားရွက်မှိုမစားတာ... ကြက်သားစားရင်အရေခွံမစားတာ အကုန်သိတဲ့သူတွေ။ အဖေ့ဘက်က ဦးလေးတွေကတော့ ဘာသာရေးကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာအောင် အမြဲလမ်းညွှန်ဆုံးမတတ်တဲ့သူတွေပေါ့။ သူတို့တစ်ခါပြောပြဖူးတဲ့ "မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ" ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးက ကန်ဒီ့အတွက် အတွေးအများကြီး ၀င်စေခဲ့တယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ကန်ဒီဟာ သူများတွေလောက် ဘုရားတရားမလုပ်နိုင်သေးပေမယ့် မိဘကိုးကွယ်လို့လိုက်ကိုးကွယ်တဲ့ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲက လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်သက်ဝင်လို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။
သူတို့ကို ကန်ဒီကန်တော့တဲ့ပမာဏက တစ်ယောက်စီခွဲလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လောက်မှမရှိတော့ စိတ်တော့သိပ်မကောင်းဘူး။ အဓိကကန်ဒီ့စေတနာနဲ့ သိတတ်မှုကို နားလည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သြော်... နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အဖေ့ဇာတိမွေးရပ်မြေ ရွှေကူမြို့မှာ ဘုန်ကြီးကျောင်းဆောက်မယ်ဆိုပြီး ဦးလေးတွေရော၊ အဖေတို့ရော အလှူငွေတွေ ကောက်နေကြတော့ ကန်ဒီလည်းအခန်းတစ်ခန်းလှူဖြစ်သွားတယ်။ အမေကတော့ ကန်ဒီ့ကို ကုသိုလ်ထူးတယ်တဲ့... တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဖေ့မြို့က ကျောင်းအလှူမှာ ပါဝင်ခွင့်ရလို့တဲ့ ^_^
ဟီးး... လခရတာနဲ့ ပျော်ပြီးရေးမိသွားတာ စာနည်းနည်းရှည်သွားတယ်။ တခြားအကြောင်းပြောရရင် အသိတစ်ယောက်က အကူအညီတောင်းပြန်လို့ မော်ဒယ်သွားလုပ်ပေးသေးတယ်။ အဂါင်္နေ့ Public Holiday ပိတ်တဲ့အပတ်ကလေ။ နည်းနည်းတော့ကြာပြီ ထင်တယ်။ ပိတ်ရက်လေးနားချင်ပေမယ့် ပြောထားပြီးသားဖြစ်နေတော့ မငြင်းချင်ပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်ပါသေးတယ်။ အဲ့နေ့က အချိန်တော့အဲ့လောက်မကုန်လိုက်ဘူး။ မိတ်ကပ်ကလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်တာဆိုတော့ အလွန်ဆုံးကြာ နာရီဝက်ပဲ။ ဓာတ်ပုံဆရာက နှစ်ယောက်... သူတို့ကိုလည်း အဲ့လောက်မစောင့်လိုက်ရဘူး။ အဲ့လိုအချိန်တိကျတာမျိုးပဲ ကြိုက်တယ်။ ရိုက်တာလဲ နေရာအပြောင်းအရွေ့နဲ့ အားလုံးပေါင်းမှ (၂)နာရီခွဲ (၃)နာရီလောက်ပဲ ကြာတယ်။ Theme ကတော့ Travel Style...
Facebookတောင် သိပ်မကြည့်မိတော့ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ တကယ်မသိဘူး။ စိတ်ထဲလည်း ဘာအတွေးမှမ၀င်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ဟဟ(xD)။ အဲ... ဒါပေမယ့်မနေ့က ပိုက်ဆံသွားလွှဲတော့ ရထားပေါ်မှာ မြန်မာကောင်လေးနှစ်ယောက် (ကန်ဒီ့ထက်တော့ အသက်ကြီးလောက်ပါတယ်) တိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ ဖုန်းကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေကျနေတာတွေ့တယ်။ ကန်ဒီသိသလောက်တော့ သူတို့ဖြစ်နေတာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုအီပြီး ဟိုကReplyတာကို နှစ်ယောက်သားဖတ်ပြီး သဘောတွေကျ ပေါက်ပေါက်ဖောက်နေကြတာ။ အဲ့လိုမျိုးတွေ ကန်ဒီအရမ်းအမြင်ကတ်တယ် သိလား... အဲ့ကောင်မလေးနေရာမှာ ကိုယ်ချင်းစာမကြည့်မိကြဘူးလား မသိဘူး။ ဟိုကတော့ တကယ်ထင်ကောင်းထင်နေမှာပေါ့... ဒီဘက်မှာတော့ နှစ်ယောက်သားရီနေလိုက်ကြတာ >.<
ကန်ဒီတစ်ခုပြောပြမယ်နော်။ စိတ်ထဲကြည်နေချင်ရင်လေ... အကောင်းမြင်တတ်တဲ့လူတွေကြားထဲနေ။ အတင်းပြောတတ်တဲ့လူတွေ... မကောင်းဘဲပြောပြီး အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့လူတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေ... ဒါဆိုကိုယ်တိုင် ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ^_^
လှတယ် ကန်ဒီ take home message လေးလဲ မိုက်တယ်။
အစ်မခင်ဦးမေ ကျေးဇူး... အစ်မဆီမရောက်တာတောင် ကြာလှပြီ :(
ဘဘနားထောင်ပါ့မယ်ကွယ် :p ( အောက်ဆုံးစာကြောင်း )
လူကြီးမိဘတွေ နှင့် အလှူအတန်းပြုခွင့်ရတာ
ဘုန်းကြီးလို့ သက်ရှည်ပါစေ ။
yes sir,,,,,alright sir...:D
You look better with this theme..
But, shoe should be something more comfortable type..
Overall, you look great!!
လူကြီးမိဘတွေကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ခလေးနဲ့ ကန်တော့ရတဲ့ပီတိကုိုယ့်စီပါကူးသွားတယ်။ လိမ္မာတဲ့ကန်ဒီလေးအမြဲအောင်မြင်မှာပါ။
ကန်ဒီတုို့ စီမှာ public library တွေရှိမှာပေါ့။ အဖွဲ့ ဝင်ပြီးစာအုပ်ငှားလို့ ရမယ်ထင်တယ်။ မ၀ယ်နုိုင်တဲ့စာအုပ်တွေဆုိုကုိုယ်ကအဲလိုအမြဲဆက်ဆက်ငှားတယ်။ လိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေ ကော်ပီဆွဲယူထားတယ်။
အထက်ကတစ်ယောက်ပြောသလိုပဲ ခရီးသွားရင်သင့်တော်တဲ့ဖိနပ်နဲ့ ဆုို theme နဲ့ ပုိုကုိုက်မယ်။ အိတ်တစ်လုံးလောက်စလွယ်သုိုင်း/လွယ်ထားလည်းပုိုလက်တွေ့ ကျမယ်ထင်တယ်။
အိပ်ရေးမဝတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့။ ပထမဆုံးရတဲ့လခလေးနဲ့ လှူခွင့်ရတာ ကြည်နူးစရာဘဲ။
ကြွက်နားရွက်မှိုဆိုတာ အမဲရောင်လေးကိုပြောတာထင်ရဲ့။ အဲဒါကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့အစာ ကန်ဒီရေ။
အမလဲ အရင်တုန်းက မကြိုက်ဘူး။ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဆရာရဲ့ဟောပြောပွဲမှာ အဲဒါက အဖြူရောင်(白木耳 )ထက် ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။
မကြိုက်လဲ နဲနဲတော့ စားနော်။
အမှန်က စီးနေကျဖိနပ်အပါးပဲ စီးသွားတာ... ဟိုရောက်တော့ ကန်ဒီ့ကိုအရပ်ပုလို့ဆိုပြီး အမြင့်စီးခိုင်းလို့ အဲ့ပုံဖြစ်သွားတာ ဟီးးးးး xD
ကိုယ့်လုပ်အားလေးနဲ့ မိဘကို ကန်တော့နိုင်တာ အရမ်းပီတိဖြစ်ရတယ်နော် ကန်ဒီ...
when we arrived kabaaye we show ur viber latter andand show ur web page ok?
ဥပမာ နမိုးလိုမျိုး ^_^
ကန်ဒီ က ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ လေးစားဖို့ လည်းကောင်းတယ်နော်။
Woww... Thanks!!! I've never heard that kind of compliment before :D